2020-2021 Haala Qolleensaa Ganna - Transportation | seattle.gov
Home Projects & Programs Safety First Winter Weather Response
2020-2021 Haala Qolleensaa Ganna
አማርኛ • اَلْعَرَبِيَّةُ • 繁体字 • 简体中文 • ភាសាខ្មែរ • 한국어 • Oromiffa • русский язык • af-Soomaali • Español • Tagalog • ភាសាខ្ម • ትግርኛ • Tiếng việt • English
Karoora Keenya Bubbeewwan Obomboleessa Gannaatiif
Seattle keessatti, ganni rooba cimaa, bubbee ol’aanaa, diiIlaLlaa bu’uu, fi cabbii fiduu ni danda’a. Qajeelcha Geejjibaa Seattle (Seattle Department of Transportation) SDOT yeroo dhahiinsi bishaan gannaa dhufutti nageenyaan jiraachuu kee mirkaneessuuf haalota to’achuu. Hojjettoonni keenya gabaasa haala qilleensaa guyyaatti sa’aatii 24, waggaa guutuu, sarara kallattiitiin armaan gadiitiin hordofu Tajajaila Haala Qilleensaa Biyyoolessaa (National Weather Service)) fi tamsaasa kallattii Doppler radar dhiyeessuun. Meeshaalee raaga haala qilleensaaYuunivarsiitii Washington (University of Washington) tiin hojjetame kan SNOWWATCH jedhamee waamamu fayyadamuun akkaataa itti bubbee obomboleessi olloota garaagaraa miidhuu danda’u ni baranna. Odeeffannoobn kun gareewan keenya jalqaba kan barbaachisan ta’uu fi dhiisuu isaanii murteesuuf gargaarsa. Meeshaaleen seensarootaa lafarra jiranii fi meeshaaleen seensaroonni riqichawwan magaalaa irratti argaman haala hoo’inaa fi qorrina qilleensaa fi lafa daandii sirrii fi waytawaa ta’e ni dhiyeessu. Daandiiwwan furtuu ta’an irratti kallattiidhaan haalota jiran laaluuf kaameeraawwan kallattyiin tamsaasan ni fayyadamna Weebsaayitii kee irratti wanttoota kaameeraan ilaalu ilaaluu ni dandeessa, www.seattle.gov/travelers.
Galmi Keenya Seattle Nageenyaan Akka Sochootu Eeguufidha
Yeroo bubbee obomboleessi hammaatutti gareen hojjettootaa keenya sa’aatii 24/7 daandiiwwan magaalichaa baay’ee barbaachisaa ta’an konkolaatawwan baasiiwwan ta’anii fi tajaajilawwan balaa tasaatiif qulqulleessuuf ni hojjetu. Cabbiin bu’uu osoo hin eegalin dura gareen hojjettootaa cabii akka hin uumne ittisuuf meeshaa farra cabbii fayyadamuun daandiiwwanii fi riqichawwan furtuu ta’an dursanii ni qulelleessu. Cabbiin bu’uu yoo eegale gareen hojjettootaa daandiiwwan irraa cabbii dhiibu ykn qulqulleessuu fi yeroo cabbiin bu’uu itti fufee bakka barbaachisaa ta’etti soogiddaan daandicha itti fufiinsuun ni qulqulelessu. Daandiiwwan gurguddaa Seattle keessa jiran keessaa daandii-sararaawwan 1200 ta’antu jira. Erga bubbeen bishaani buute booda lafa kan hundumaa qulqulleessuuf hanga sa’aati 12 fudhachuu ni danda’a. Sirna Agarsiisa Iddoo Addunyaa (Global Positioning System) GPS iddoowwan meeshaalee qonnaa fi konkolaataawwan garagalchaa barbaaduu. Kaartaan weebsaayitii keenya irra jiru daandii hangam yeroo dhiyootti akka qulquleleffame ni agarsiisa: www.seattle.gov/StormResponseMap
Waggaa Guutuu Cabbiif Ni Qiphoofna
Yeroo bonaa keessa hojjettoota ni leenjisna, meeshaa ni quutna, akaksumas shariikota eejansii naannoo waliin ni hojjenna Kana jechuun gareen hojjettootaa keenya yeroo raajni haala qilleensaa bubbee ol’aanaa, rooba cimaa yookan cabbii fi rooba cabbii jirutti gara hojii deemuuf qophiidha. Hojiin isaanii daandiiwwan mukkenii fi dameewewan cabbii fi rooba cabbii irratti kufan qulqulleessuu fi mallattoowanii fi agarsiistota suphuudha. Dhiyeessiin sooqiddaa fi dhangala’aan farra cabbii kuusaa keessa jiraachuu isaanii ni mirkaneessina.
Riqicha Hojjaa Ol’aanaa Lixa Seattle Fi Deebii COVID-19 Tiif Kennamu
Ji’oota gannaatiin olitti imaltoonni Lixa Seattle fi Duwamish Valley naannoo kana gahan bara 2020 keessa sirritti jijjiraman Baroota muraasa dhufan keessatti namoonnii gara naannichaa imalanii fi bahan irratti dhiibbaa dabaluun dhiibban irratti taasifamuu itti fufa. Daandiiwwan jijjiirraa Riqicha Lixa Seattle yeroo amama kanatti cabbii fi rooba cabbiittiin kan guutaman akka ta’e mirkaneessineerra. Yeroo rakkisaa kanatti akkaataan itti namootaa fi meeshaalee akka socho’an gargaaruu ndandeessu kanadha:
Karoora baasi akkasumas daandiiwwan jijjiirraa irratti konkolaataa hedduun akka jiru eegi.
Bakka deemuu barbaaduu ga’huuf ofii keetiif sa’aatii dabalataa kenni.
Tooftaalee imalaa haraa kan akka miilaan adeemuu, biskileetii oofuu, yookan konkolaataa baasii fayyadamuu yaali. Qofaa kee hin konkolaachisin yoo danda’ame.
Imaltoota akka keetiif obsaa fi garraamii ta’i akkasumas olloota qarqara daandii ati fayyadamtuu jiraatan hubannoo keessa galchi.
Iddoowwan qorannoo dhikkuba COVID-19 hudi karoora haala qilleensa gannaa keessa jiraachuu isaanii ni mirkaneessina Akkasumas iddoowwan dabalataa akkuma dabalamanii fi iddoowwan jijjiiraman nuti haaluma jiruun jijjiiruun sirreessuu ni dandeenya!
Iddoowwan Daandii Cinaa Irraa Deeman Qulqulleessuuf Gahee Kee Bahi
Hundi keenya waliin as keessa jirra akkasumas tokkoon tokkoon namoota cinaa daandii imala miilaa kan mana keetii fi bakka hojii daldalaa kee fuuldura jiru yeroo cabbiin bu’u qulqulleessuuf itti gaafatamummaa qaba. Cinaawwan daadnii miilaan irra imalan maayiloota 2,400 ol ta’an Seattle keessa kan jiran yoo ta’u akkasumas gareen hojjettoota SDOT yeroo tokkotti bakka hunda ta’uu hin danda’a. Nutis cinaa daandiidiiwwan imala miilaa kanneen gamoowwan dhuunfaan qabaman cinaa hin jirree akka qulqulleesinuu fi daandiiwwan magaalichaa baay’ee barbaachisaa ta’an qulqulleessuu irratti xiyyeeffachuu akka dandeenyu isin gahee keessan akka baatan isin irratti irkanna. Cinaawwan daandii imala miilaa mana yookan hojii daldalaa keessan fuuldura jiran qulqulleesuun seera qofa miti namni tokkoon tokkoon namootaa yeroo cabbiin bu’u nageenyaan imaluu akka danda’aniif keessattuu namoota ija jaamaa, yookan namoota naannoo akkasii keessa imaluuf isaan rakkisuutiif wanta gaarii hojjechuu qabnuudha. Hawwaasa kee keessa eenyu akka gargaarsa barbaadu beekuuf osoo bubbee obomboleessi hin dhufin dura olloota keessan dubbisaa. Wal gargaaruuf waliin hojjechuu fi cinaawwan daandii imala miila mana naannoo mana keetii jiruu hunda qulqulleessuu fi tokkon tokkoon namootaa nageenya naannoo sana irra imaluu akka danda’u mirkaneessuuf karoora baasuu.
Akkaataa itti qophaa’an:
Osoo bubbee obomboleessi hin dhufin dura meeeshaa kuufachuu. Akaafaa cabbiin haran, korojoo soogidda daandii, uffata ho’aa, uffataa qorraa dabalataa, ibsaa tirikaa, meeshaalee gargaarsa sadarkaa duraa, fi nyaaata, bishaan fi qoricha maatii guutuuf guyyaa sadi ni dhiyeessu.
Osoo hin dilallaa’in duratti soogidda kattaarra (yookan oomisha naannoo hin miine) firfirsuun akka cabbii hin uumne ittisuu.
Yoo cabbii buusuu eegale osoo harcaa’uun isaa cabbii hin uumin dura tokkon tokkoon sa’aatii 12 keessatti cinaa daandii imala miilaa haruu. Yoo dandeesse ollaa gaarii ta’I akkasumas bo’oowwanii fi gadi bu’a rogaa maramaa naannoo mana keetii lolaa maqsuun qulqulleessuuf gargaari yookan olloota gargaarsa barbadan gargaari.
Birooshara Haala Qilleensa Gannaa keenya buufadhaa!
Nuuf bilbiluu ykn ii-meelii nuuf barreessuu dandeessu!
Readiness & Response Plan